ANTOKO LEADER FANILO : « Rajoelina no kandidà mampiray ny Malagasy »
Niaiky ny antoko Leader Fanilo tarihin’ny filohany, Rabesa Zafera Antoine rehefa nivory ny birao nasionaly niaraka tamin’ny « Comité d’Orientation » fa ny Kandidà laharana faha-13 ihany no kandidà nahitana taratra ny fampiraisam-pirenena tamin’ iny fihodinana voalohany iny satria ny maro an’isa isaky ny faritra nanerana azy 22 dia hita hatrany fa nifidy azy ny Malagasy. 5 décembre 2018
Izany hoe, tena naharesy lahatra ny Malagasy maro an’isa isaky ny faritra nanerana ity Nosy iray manontolo ity ny kandidà laharana faha-13. Manginy fotsiny ny vina sy ny tetikasany izay hanafaingana ny fanavotana ity Firenena efa latsaka an-katerena ity. Noho izany, nanapa-kevitra izy ireo fa handany, hiandany ary hampandany ny kandidà laharana faha-13 amin’ny fifidianana fihodinana faharoa izay hotanterahina ny faha-19 desambra ho avy izao.
Ho an’ity antoko naorin’ingahy Herizo Razafimahaleo ity, rain’ny « Etika Politika » na tsy nanana kandidà aza izy ireo nandritra ny fihodianana voalohany, noho ny tombontsoa ambonin’ ny Firenena sy ny ho avin’ny antoko, nandray fanapahan-kevitra izy ireo amin’izao fihodinana faharoa izao fa hanohana an-dRajoelina Andry Nirina, izay efa tsy zoviana amin’ny mpiray tanindrazana intsony tamin’ ny asa efa nataony sy ny sedra nolalovany amin’izany fitiavan-tanindrazana izany.
Tsy nitsodrano an’i Jean Max Rakotomamonjy
Nanambara moa ny mpitondra tenin’ity antoko ity, Babala fa Rakotomamonjy Jean Max izay nilaza ho natolotry ny antoko Leader Fanilo tamin’iny fihodinana voalohany iny dia tsy nahazo tsodrano tsy akory fa nampiasa ny anaran’ny antoko fotsiny ihany. Nankinina tamin’ny fahatsiarovan-tenan’iny kandidà iny moa ny tokony ho nataony kanefa dia ninia nikimpy izy ka iny niaraha-nahita iny ny vokatra azony.
Nolavin’ny vahoaka ny fandresen-dahatra nataony ary azo lazaina ho naloam-bahoaka mihitsy aza ranamana raha filohana andrim-panjakana no tsy mahazo iray isan-jaton’ny vato manan-kery akory. Porofo ireny, hoy Babala fa tsy nahazo tsodrano iny rangahy iny.
Koa amin’izao toe-draharaham-pirenena izao, tsy mlahay mangina ny Leader Fanilo fa maneho ny safidiny ary mitaona ny mpiray tanindrazana hanohana ny Filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Nirina Rajoelina.
Tsy vaovao akory ny fiarahan’ity antoko ity amin-dRajoelina fa fony ity farany nilatsaka Ben’ny tanànan’Antananarivo ny taona 2007 no efa nanohana azy izy ireo. Tonga indray ankehitriny ny fotoana ilana fanarenana maika an’i Madagasikara ka dia manohana azy ny Leader Fanilo.